Fahombiazan’i Egypta tany amin’ny Lalao Paralaimpika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2018 5:08 GMT
Niteraka resabe tany Beijing, Shina anatontosana ny Lalao Paralaimpika tamin'ny 6 ka hatramin'ny 17 Septambra 2008 ireo atletan'i Egypta. Raha nandrombaka ny medaily alimo tamin'ny Lalao Olaimpika tany Beijing i Egypta dia nahitana fahombiazana tsy toy ny hafa ireo atleta tamin'ny Paralaimpika. Tamin'ny fotoana nanoratana, nahazo medaily volamena miisa efatra, medaily volafotsy miisa telo ary medaily alimo miisa efatra ny ekipa.
Hoy i Ibn Ad Dunya nanoratra hoe:
Tahaka ny andriambin'ny medaily ny ekipa mpibata fonjamby Egyptiana amin'ny Paralaimpika tao Beijing. Vao nandrombaka ny medaily volamenany faharoa i Egypta tamin'ny sokajy 56 Kg ho an'ny lehilahy izay azon'i Sherif Osman, izay nanamontsana ny zava-bita tsara indrindra erantany in-telo teny amin'ny Podium, ka nahitana ny vokatra farany tamin'ny 202,5 Kg.
Ity no medaily volamena faharoa taorian'ny medaily volamena azon'i Fatma Omar omaly, izay VOLAMENA Paralaimpika azony in-telo nisesy, taorian'ny nahazoany an'izany tany Sydney tamin'ny taona 2000 ary tany Atena efa-taona taty aoriana.
Tena faly tokoa aho mandre momba ny vehivavy iray mpandray anjara hafa tamin'ny fibatana fonjamby izay mbola miandry hatrany ny oram-pandreseny (antenaina fa rahampitso ). Manana zanakalahy dimy taona i Rania Alaa Eldin Morshedi kanefa mbola manohy hatrany mifaninana eo amin'ny sehatra iraisampirenena izy. Tsy mahazatra loatra izany ho an'ny vehivavy manao fanatanjahantena any Egypta, matetika izy ireo no mandao ny lalam-pivoarany raha vantany vao mahazo diplaoma ary manambady. Araka ny fijeriko azy, mijanona amin'ny asany izy ireo mialoha ny hanatrarany ny tanjony, ary indraindray tsy afaka mioty ny vokatry ny asany mafy nataony nandritra ny taona maro.
Namintina ny isan'ny medaily azo hatreto i Zeinobia :
Miarahaba ireo maherifontsika tany amin'ny lalao Paralaimpika tany Beijing izay nanandratra ambony ny lohantsika niaraka tamin'ny fahombiazana lehibe azon'izy ireo. Misaotra an'ireo maherifontsika, nahazo medaily miisa 6 isika hatramin'izao: 5 tamin'ny fibatana fonjamby ary iray tamin'ny atletisma. Nahazo medaily volamena roa isika, volafotsy iray sy alimo telo .
Tsidiho ny tranonkala ofisialin'ny lalao ho an'ny vaovao amin'ny antsipiriany momba ny medaly azon'ny ekipa Egyptiana izay nandray anjara tamin'ny Paralaimpika .